Vaovao - Inona no mampiavaka ny karazana anilox roller
Inona no mampiavaka ny karazana anilox roller
Inona no metaly chrome plated anilox roller？ Inona avy ireo toetra?
metaly chrome plated anilox roller dia karazana anilox-roller vita amin'ny vy karbaona ambany na takelaka varahina mipetaka amin'ny vatan'ny horonana vy.Ny sela dia vita amin'ny alàlan'ny sokitra mekanika.Matetika ny halaliny dia 10 ~ 15pm, elanelana 15 ~ 20um, Avy eo dia miroso amin'ny chrome plating, ny hatevin'ny sosona nopetahana dia 17.8pm.
Inona no atao hoe roller anilox seramika?Inona avy ireo toetra?
Ny roller anilox seramika voapoizina dia manondro ny famafazana amin'ny tontolon'ny texture amin'ny fomba plasma Synthetic seramika vovoka miaraka amin'ny hatevin'ny sosona 50.8um, mba hamenoana ny grid amin'ny vovoka seramika.Ity karazana anilox-roller ity dia mampiasa grefy coarse mba hitovy amin'ny habetsahan'ny grid fine voasokitra.Ny hamafin'ny horonana anilox seramika dia mafy kokoa noho ny anilox misy chrome.Ny lelan'ny dokotera dia azo ampiasaina amin'izany.
Inona ny toetran'ny rollers anilox seramika voasokitra tamin'ny laser?
Alohan'ny hanaovana ny tamin'ny laser voasokitra seramika anilox-roller, ny ambonin'ny vy-roller vatana dia tsy maintsy diovina amin'ny sandblasting mba hampitombo ny adhesion ny ambonin'ny vy-roller vatana.Avy eo dia ampiasao ny fomba famafazana lelafo mba hamafazana vovoka metaly tsy manimba eny ambonin'ny vatan'ny vy-roller, na welded ny vy amin'ny substrate mba hahatongavana amin'ny savaivony ilaina mba hamoronana substrate vy matevina, ary farany dia ampiasao ny fomba famafazana lelafo amin'ny oxidize. krômôma seramika manokana Ny vovoka dia voafafy amin'ny vatan'ny roller vy.Aorian'ny famolahana amin'ny diamondra, ny tontolon'ny-roller dia misy fitaratra vita amin'ny fitaratra ary miantoka ny coaxiality.Avy eo, ny vatana-roller vy dia apetraka amin'ny laser sokitra milina ho an'ny sokitra, mamorona harato ranomainty lavaka amin'ny fandaminana tsara, mitovy endrika, ary mitovy ny halaliny.
Ny roller anilox dia singa manan-danja amin'ny milina fanontam-pirinty flexographic mba hiantohana ny famindrana lalan'ny ranomainty fohy sy ny kalitaon'ny ranomainty fanamiana.Ny asany dia ny mamindra amin'ny fomba mitovy ny ranomainty ilaina amin'ny ampahany amin'ny takelaka fanontam-pirinty.Rehefa manao pirinty amin'ny hafainganam-pandeha avo dia afaka misoroka ny fiparitahan'ny ranomainty